सबैले ल्याटिन लोकप्रिय अभिव्यक्ति स्मृति चिन्ह पुरानो सोभियत फिलिम को हीरो wrongly रूपमा अनुवाद जो mori, थाह "तत्काल -। समुद्रमा" वास्तवमा, एक समुद्री विषय, यो कथन अप्रासंगिक छ र यसको शाब्दिक अनुवाद "मृत्युको सम्झना" हो। केही हामी सबै उपस्थित केही हदसम्म अनन्त तुवाँलो डर। त्यहाँ कम्तिमा मेरो जीवनमा एकपल्ट लाग्यो गर्नेहरूलाई एक प्रकाश शायद छ के मृत्यु छ, कसरी, कहिले र यसलाई आउँछ किन, कि मानिस मृत्यु अघि, महसुस आदि दुर्भाग्यवश, पृथ्वीमा केही छैन अनन्त छ, र मान्छे - कुनै अपवाद छ।
मृत्युको डर छैन भने यो उचित सीमाहरु पारित गर्दैन, एक विकृति वा कायरता एक चिन्ह हो। हामी कुनै पनि आफ्नो जीवनको बारेमा चिन्ता गर्छन, र त्यो ठीक छ। खत्तम, स्वस्थकर भय मात्र निमित्त गर्दा खतरनाक परिस्थिति जोगिन लगिनेछ गर्न, यो एक phobia मा उत्तेजित गर्दछ। यस्तो भावना उद्भव लागि, धेरै कारणहरू छन्। सबै को पहिलो, यो आफ्नो सन्तान भूल गरिने अनिश्चितता र नचाहनु हो। अर्को साधारण कारण - मृत्युको डर। यो हुनेछ जब कुनै एक अग्रिम थाहा गर्न सक्नुहुन्छ, र चुन्नु के एक तरिका हो। "यो छिटो वा दुखाइ हुनेछ? आफ्नो मृत्यु अघि कस्तो मानिस महसुस? यो जीवन भागमा सजिलो छ? जस्तै Chilling प्रश्नहरू संसारको सबै बासिन्दाहरू भ्रमण र एक पटक भन्दा बढी - मरिरहेका अघि के शब्दहरू मरिरहेका दलदल गर्न प्रबन्धन "?। तिनीहरूलाई स्पष्ट जवाफ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन र मृत्यु दुवै आफ्नो छ देखि, सम्भव छैन।
सामान्यतया, nothingness को आतंक ती जसको अस्तित्व रोचक घटनाहरू सबै किसिमका भरिएको छ भन्दा, बोरिंग नीरस र joyless जीवन बिताउन मान्छे बढी विशिष्ट छ। अझै पनि जमीन मा आफ्नो रहन समयमा समय छैन भनेर पहिलो डर, दोस्रो कहिलेकाहीं छ केवल एकपटक यस्तो प्रश्न - तिनीहरूले जीवन छ र त, तिनीहरूले भन्न, फोडे। अचानक गहिरो र लामो समयसम्म एनेस्थेसिया लागि वा क्लिनिकल मृत्युको अवस्थामा भएको मान्छे मा प्रमुख शल्यक्रिया गर्ने ती देख्न यस संसारमा छोडेर को अक्सर डर। यो कथा मा पटक आतंकित गर्नु, चेतना पुन: प्राप्त, तिनीहरूले बताउनुहोस्। निस्सन्देह, फिर्ता सामान्य जीवन प्राप्त गर्न सजिलो छैन वास्तवमा जीवित मा बाँकी हुँदा, उहाँको मृत्यु अघि एक मानिस महसुस के र अनुभव "दुनिया को कगार मा भएको भएको"। त्यस्ता मानिसहरूलाई तिनीहरूले बिहान उठ छैन बलियो डर छ, किनभने राति सुत्न जाने डर अक्सर छन्। सम्भव पनि आवश्यक समान phobias सामना। पहिलो, का "आज र अहिले" रोचक घटनाहरू हरेक दिन आफ्नो भर्न प्रयास यो दीर्घकालीन योजना रोक्न, उदाहरणका लागि, आफैलाई गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तर बाँच्न दिनुहोस्। यदि यस्तो उपचार गर्न मद्दत गर्दैन, यो एक विशेषज्ञ देखि व्यावसायिक मद्दत खोज्न बुद्धिमानी हो।
स्वतन्त्र आफ्नो नातेदार र प्रियजनहरूलाई जीवनमा लागि डर छ। साँच्चै, यो तपाईं प्रेम जसलाई व्यक्ति, अचानक गएका भनेर कल्पना गर्न कठिन छ। अझ कठिन तरिका दुःख सुख गर्न, उहाँलाई मदत गर्न केहि गर्न सक्षम नभइकन, नजिकको साथी वा नातेदार (उदाहरणका लागि, एउटा लामो रोग समयमा) को क्रमिक मन्दहोता पालन गर्न। पार्थिव शरीर मात्र होइन तार्किक अन्त, तर पनि प्राण को एक नयाँ यात्राको शुरुवात हो - आफूलाई शान्त र स्नायु प्रणाली पुनर्जीवित गर्न साना गर्न, यो मृत्यु कि सम्झन गर्न आवश्यक छ। सायद अर्को संसार र अर्को उपस्थिति मा हाम्रो जमीन मा भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ।
निष्कर्ष मा, म मृत्युको डर आफ्नो जीवनकालमा एक व्यक्तिले नष्ट गर्दैन भन्न चाहन्छु। हामी खतरा आफूलाई पर्दाफास हरेक दिन - हामी चालक dashing पछि जान सक्नुहुन्छ जहाँ राजमार्ग, पार, निरन्तर झर्ने छन् जो एक विमान, उड, हामी सधैं राम्रो मनसाय छ नगर्ने मान्छे भेट्न। तपाईँको आफ्नै घरमा, हामी आगो, भूकम्प वा राम्रो हुन सक्छ जो आफ्नो टाउको मा झूमर, को गिरावट विरुद्ध बीमा छैन घातक नतिजा। बस रंग मा लगातार यो विचार छैन भनेर मानिसले आफ्नो मृत्यु अघि महसुस छ, यो लामो विचार सम्पत्ति को materialization हुन् भनेर सिद्ध छ के उहाँले आफ्नो जीवन, र अरूलाई अन्तिम क्षणमा सोच थियो। गरिएको, त्यसैले अनावश्यक अवस्था आकर्षित गर्न, भाग्य लोभ्याउन छैन अपरिवर्तनीय नतिजा संग।
टूट एडी: के को कारण
विश्व क्यान्सर दिवस: इतिहास
अनातोली Unitsky: एक परी कथा साँचो आउन बनाउन जन्म
फुटबल लागि जूता कसरी चयन गर्ने? सबै भन्दा राम्रो मोडेल र सिफारिसहरू
Autorefractometry - यो के हो र यो कसरी बाहिर छ?
जो एक प्रयास गर्नुपर्छ अंगूर, - "परिवर्तन"!
Teflon कोटिंग - हानि वा लाभ उठाउन? Teflon cookware: समीक्षा
Chanalai Hillside Resort4*, थाईल्याण्ड होटल विवरण, समीक्षा
कार "टोयोटा क्राउन": फोटो, विनिर्देशों र समीक्षा
झडप रोयाले मा सबै भन्दा राम्रो चाल